ချန်ပီယံလိဂ် ရဲ့ ပုံစံသစ် ၊ ချဲလ်ဆီးပိုင်ရှင်သစ် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ တူရကီသူဌေးကြီး ၊ နွေရာသီအတွက် ပြင်ဆင် ဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
ချန်ပီယံလိဂ် ရဲ့ ပုံစံသစ် ၊ ချဲလ်ဆီးပိုင်ရှင်သစ် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ တူရကီသူဌေးကြီး ၊ နွေရာသီအတွက် ပြင်ဆင် ဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
ဥရောပ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ( UEFA ) ဟာ ၂၀၂၄ – ၂၅ ရာသီက စတင်ပြီး အသုံးပြုမယ့် ချန်ပီယံလိဂ် ရဲ့ ပုံစံသစ် ကို ယမန်နေ့က ထုတ်ဖော် သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ပြိုင်ပွဲဝင် အသင်း အနေနဲ့ လက်ရှိ ၃၂ သင်း ကနေ ၃၆ သင်းကို တိုးမြှင့် သွားမှာ ဖြစ်ပြီး အုပ်စု အဆင့် ကို အသင်းများစွာ ပါဝင်တဲ့ အမှတ်ပေး ပြိုင်ပွဲ ပုံစံ အဖြစ် ပြောင်းလဲ သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
အဆိုပါ အမှတ်ပေး အဆင့်မှာ အသင်းတိုင်းဟာ အိမ်ကွင်း ၅ ပွဲ ၊ အဝေးကွင်း ၅ ပွဲ ကစားရမှာ ဖြစ်ပြီး အဆင့် ၁ ကနေ ၈ အထိ အသင်းတွေဟာ ရှုံးထွက် အဆင့်ကို တက်ရောက်ခွင့် ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
အဆင့် ၉ ကနေ ၂၄ အတွင်း အသင်းတွေကတော့ ရှုံးထွက် အဆင့် တက်ခွင့် ရဖို့ အတွက် ပြန်လည် မဲနှိုက်ပြီး နှစ်ကျော့ ကစားရမယ့် Play-off ပွဲစဉ်ကို ပြန်လည် ယှဉ်ပြိုင် ကစားရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီပုံစံသစ်ဟာ လက်ရှိ ယှဉ်ပြိုင်နေတဲ့ ပုံစံထက် ပွဲစဉ် ၁၀၀ ပိုများ လာမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရ ပါတယ် ။
ဖော်မြူလာဝမ်း ပြိုင်ကား အဖွဲ့ချုပ် ကတော့ ရုရှ နဲ့ စာချုပ်ချုပ်ဆို ထားမှုကို ဖျက်သိမ်း လိုက်ပြီး ရုရှ မြေပေါ်မှာ ပြိုင်ပွဲတွေ ပြုလုပ် တော့မှာ မဟုတ်ကြောင်း အသိပေး သွားခဲ့ ပါတယ် ။
တရုတ် နိုင်ငံ ကတော့ ယူကရိန်း ကို အားပေးထောက်ခံမှုတွေ ပြုလုပ်ကြောင်း နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ ဖော်ပြမယ့် ဒီတပတ် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်တွေကို နိုင်ငံ အတွင်း ထုတ်လွှင့်ပြသခွင့် တားဆီး သွားဖို့ ရှိနေတယ်လို့လည်း သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး နည်းပြ သောမတ်စ် တူချယ် က အသင်းပိုင်ရှင် ရိုမန် အေဘရာမိုဗစ်ချ် က ချဲလ်ဆီး ကို ရောင်းချဖို့ ဖြစ်လာတာဟာ နွေရာသီမှာ စာချုပ်ကုန်မယ့် ကစားသမားတွေကို သက်တမ်းတိုးဖို့ အခက်ခဲ ဖြစ်သွား စေနိုင်ပြီး အလွတ် နဲ့ လက်လွှတ်ရမှာကို စိတ်ပူ မိကြောင်း ပြောဆို လာခဲ့ ပါတယ် ။
ရိုးမား အသင်းဟာ ဇွန်လ မှာ ဘင်ဖီကာ အသင်းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်း ကုန်မယ့် ဂိုးသမား မိုင်းလ် ဆဗီလာ ကို ခေါ်ယူ နိုင်ရေး အတွက် စတင် ဆွေးနွေး လှုပ်ရှား နေပြီလို့ သိရ ပါတယ် ။ ရိုးမား နည်းပြ မော်ရင်ဟို ဟာ ဆဗီလာ ကို အသင်းမှာ ကာလရှည် အသုံးချဖို့ စဉ်းစား ထားတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ အသင်းဟာ အာဂျင်တီးနား အခြေစိုက် ရေးဆင်း အသင်းရဲ့ လူငယ် ကစားသမားလေး ပါဘလို တိုရီ ကို ယူရို ၅ သန်း ပေးချေကာ ခေါ်ယူဖို့ သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
၂၀၀၄ ခုနှစ်ဖွား လူငယ်လေး ကို ဘာစီလိုနာ က ၂၀၂၆ အထိ စာချုပ် ချုပ်ဆိုမှာ ဖြစ်ပြီး အပိုဆုကြေး အပါအဝင် ယူရို သန်း ၂၀ အထိ ပေးချေ ရဖွယ် ရှိတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ဟာ ဇန်နဝါင်္ရီ တုန်းကမှ အငှား + အပြီးသတ် ဝယ်ယူခွင့်နဲ ရောက်လာပြီး ပုံစံကောင်းတွေ ပြသနေတဲ့ အကယ်ဒမီ ကစားသမားဟောင်း ထရာအိုရေး ကို ရာသီကုန်မှာ အပြီးသတ်ဝယ်ယူဖို့ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တိုင်ပင် ဆွေးနွေး နေဆဲ ဖြစ်တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
PSG အသင်းဟာ စပို့တင်း ကနေ အငှားနဲ့ ခေါ်ယူထားတဲ့ နူနို မန်ဒက်စ် ကို အပြီးသတ် ဝယ်ယူဖို့ အတွက် ပေါ်တူဂီ ကလပ် နဲ့ ဆွေးနွေး ပြောဆို နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။ ကာယကံရှင် ကစားသမားကလည်း PSG မှာ ဆက်နေလိုပြီး အပြီးသတ် ဝယ်ယူမှု ဖြစ်မြောက်ဖို့ မျှော်လင့် နေတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး ကို ဝယ်ယူမယ်လို့ သတင်းကြီးနေသူ ဆာ ဂျင် ရတ်ကလစ် က ငြင်းဆိုပြီးမှာ နောက်ထပ် သတင်းထွက် နေသူ အီဂျစ် ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူ လော့ဖီ မန်ဆော် ကလည်း သူဟာ ချဲလ်ဆီး ကို ဝယ်ယူဖို့ အတွက် ကမ်းလှမ်းမှု ပြုလုပ်မှာ မဟုတ်ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး အသင်းပိုင်ရှင် အေဘရာမိုဗစ်ချ် ရဲ့ ဂျက်လေယာဉ် ဟာ တူရကီ နိုင်ငံ အန်ကာရာ မြို့တော်မှာ အခု ရက်သတ္တပတ် အတွင်း တွေ့ရှိ ခဲ့ရမှု ဟာ တူရကီ ဘီလီယံနာ မူရှင် ဘေရက် ကို ချဲလ်ဆီး ပိုင်ရှင်သစ် ဖြစ်လာဖို့ ရေပန်း စားလာစေခဲ့ ပါတယ် ။
မူရှယ် ဘေရက် ဟာ ချဲလ်ဆီး ကို ဝယ်ယူဖို့ အစီအစဉ် ရှိခဲ့ဖူးသူ တယောက် ဖြစ်ပြီး စီးပွားရေး လောကမှာ ထင်ထင် ပေါ်ပေါ် နေထိုင်လေ့ မရှိတဲ့ ဘီလီယံနာ တယောက် ဖြစ်တယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
မနေ့ညက ကစားခဲ့တဲ့ စီးရီးအေ ပွဲစဉ်မှာတော့ အင်တာမီလန် ဟာ စလီနာတီတာ အသင်းကို လူတာရို မာတီနက် ရဲ့ ဟက်ထရစ် အပါအဝင် ၅-၀ နဲ့ ဂိုးပြတ် အနိုင်ရရှိခဲ့ ပါတယ် ။
စပိန် လာလီဂါမှာတော့ ဆီဗီးလား ဟာ အာလာဗက်စ် အသင်းနဲ့ ဂိုးမရှိ သရေ ကျခဲ့တာကြောင့် အဆင့် ၁ က ရီးရဲ ကို ဖိအားပေး နိုင်မယ့် အခွင့်အရေး ကို လက်လွှတ်ခဲ့ရ ပါတယ် ။
Previous Article လီဗာပူးမှာ လျှင်မြန်စွာ အထိုင်ကျပြီး ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ လူး၀စ်ဒီယက်ကို သတိပေးသွားခဲ့တဲ့ ပေါလ်မာဆွန်
Next Article မန်စီးတီး vs မန်ယူနိုက်တက်?? ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၂၈ အတွက် မိုက်ကယ်အို၀င်ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်များ